mars 2022 – Madatopinfo
« Miaraka anaty fahasamihafana ho fampandrosoana ny Oniversiten’Antananarivo », io no teny filamatry ny Profesora Randrianasolo Rivoarison, kandida ho Filohan’ny Oniversiten’Antananarivo. Tsiahivina fa ny 1 Febroary lasa teo izy no nanambara tamin’ny
Tafiditra tanteraka ao anaty tondrozotran’ny fitondram-panjakana amin’ny alalan’ny ministeran’ny Fizahantany ny fampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara. Ampinga iray hahatongavana amin’izany fisian’ny « Tsenaben’ny Fizahantany ». Araka ny fampahafantarana nandritra ny
ESTIIM’ : Nanokafana ny « cafe thé-matique 2022» ny lohahevitra mikasika sy adin’ny Ukraine sy Russie
Tsy mihonona fotsiny amin’ny taranja ratovona ao an-tsekoly ny mpianatry ny sekoly ambony tsy miankina ESTIIM’ (Engineering School of Tourism, Informatics, Interpreteship and Management), misy ihany koa ny tetikasa izay
PLATEFORME ETAT REGIONAL: Hanolotra rafitra sy Lalàm-panorenana vaovao eto Madagasikara
« Lova tsara apetraka ho an’ny taranaka faramandimby » io no teny filamatry ny Plateforme Etat Régional izay tafatsangana tamin’ny fomba ofisialy ny zoma 18 martsa lasa teo teny Anosy ary nampahafantarina
SYNAD : Voafidy ho Filoha vaovao i Paolo Emilio Raholinaivo Solonavalona
Tontosa ny zoma 18 martsa teo teny Anjomakely ny Fivoriamben’ny Synad (Syndicat National des Administrateurs Civils de Madagascar) izay natrehan’ny
« Mila hadihadiana lalina ny vola nivoaka rehetra fa tsy tokony hihonona fotsiny amin’ny fampidirana am-ponja ireo tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny
Niravona ny disadisa momba ilay raharaha « parking » eny Mahamasina sy ny manodidina. Tsy nandamoaka ny fihaonana tamin’ny Ben’ny Tanàna an’Antananarivo
Mendrika hasongadina ny sehatry ny hai-tao malagasy ahafahana mampivelatra ny harem-pamoronana sy ny kolontsaina eto an-toerana. Amin’ny alalan’ny « Tana design
Andry iankinan’ny fikarakarana ao an-tokantrano amin’ny ankapobeny ny renim-pianakaviana, maro ny adidy aman’andraikitra sahaniny eo anivon’ny ankohonany sy ny fiaraha-monina